php and flash - MYSTERY ZILLION
March 2011 edited March 2011 in PHP
အကိုရေ flash ရယ် PHP ရယ် Mysql ရယ် တွဲသုံးတဲ့ စာအုပ်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်။ နမူနာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေရင် မျှေ၀ပါဦးနော်.. ဖတ်ချင်လို့။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဆွေးနွေးပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ လေးစားစွာဖြင့်.
PHP, Flash, MySQL တွေတော့ အောက်က Link တွေမှာရှာကြည့်ပါ။
"Google is your master..!"
So, my friend named me as Kookle. rofl
ဟုတ် အကို .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကို.. ညီလေး ဒေါင်းလုပ်ယူတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟီး။ နောက် တစ်ခုလောက် အကူညီတောင်းချင်လို့ အကို။ အခု ကျွန်တော် စက်မှာ xampp သုံးပါတယ်။ အဲဒါ database ဆောက်ပြီး table ထဲက data တွေကို flash မှာ ပြချင်တာ။ flash ကနေ insert လုပ်တာ အဆင်ပြေတယ်အကို။ အဲဒါ table ထဲက data ကို swf မှာ ပြချင်တာကိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသလို့။ ကူညီလေးပါဦးနော့။
I'm not that much geek bro.
But, I'll try to help you. You can ask bro လူပျိုကြီး or bro Saturn.
myintmyatmg wrote: »
get data like that
MySQL -> PHP -> XML -> Flash
write php file, to get data from mysql. and then export XML.
So, flash can read php file like XML.